Ifulethi elincane eBreb's Cozy Barn engadini eluhlaza - I-Airbnb
Ifulethi elincane eBreb's Cozy Barn engadini eluhlaza
Indlu yezivakashi engikwamukela kuyo, ibekwe engadini enhle eluhlaza, kwenye yezindawo zendabuko ezaziwa kakhulu eTransylvania ...lapha usengakwazi ukuncoma indlela yokuphila yakudala, abantu besondelene nemvelo futhi ukusebenza umhlaba phezu kwendlela yasendulo es...Ngazizwa ngimthanda uBreb futhi nganquma ukuhlala lapha... Ngiyazithanda izindlu zamapulangwe zakudala, ngihlala endaweni eyodwa futhi manje ungathola konke lokhu njengakho konke. Kusukela endleleni le Barn eyayakhiwe ngayo ekuqaleni, manje isihlukaniswe ngezindawo ezi-2 ezizimele (iminyango ehlukene emi-2, amakhishi ama-2, amagumbi okugeza angu-2 namagumbi okulala amakhulu angu-2) engaqashwa ngokuhlukana noma indlu yonke uma niyiqembu elikhulu, jabulelani futhi yenzela wena konke! Ngiwabiza ngamafulethi....elincanyana (elibalwe lapha) lakhiwe endaweni okwakuyisitebele sezilwane...manje isiyigumbi elithokomele elinekona lokufunda/lokucula/lokuphumula, ikhishi elihle lapho ungenza khona. ikhofi lakho, lungisa ukudla kwasekuseni..njalo njalo kanye nendlu yokugezela encane esebenzayo eneshawa. Phezulu kunekamelo lokulala elikhulu elinombhede owodwa womshado, umbhede wengane eyodwa futhi uma kudingeka umbhede othokomele wesitulo wengane yesibili. Izingane zamukelwa kakhulu , zinenkundla yokudlala ezungezile futhi mayelana ... Izinja zakho eziziphethe kahle nazo zamukelwa, ukuze ujabulele iholide lakho nomndeni wakho owandisiwe. Amafulethi amabili awakhulumisani ngaphakathi....kodwa ngaphandle izindawo/izindawo ezivamile zingabelwa ezinye izihambeli.
Kusuka eBreb's Cozy Barn, ebekwe ngaphandle komgwaqo omkhulu, endaweni ethule yedolobhana ongayenza, ungaqala ukuhlola idolobhana elihle, noma uma ungumuntu othanda imvelo, vele uthathe ilungelo bese ulahleka emasimini otshani omlingo, izimbali zasendle. , ephelezelwa ojekamanzi, izimvemvane, izingoma zezinyoni futhi uvele uzivumele uthakathwe yimvelo emangalisayo. Useduze namasonto amaningi enziwe ngokhuni aseMaramureș, asohlwini lwamagugu e-UNESCO kanye neMerry Cemetery evela eSapanta. Ungakwazi ukuphumula ngencwadi nesiphuzo ku-hammocks ngaphansi kwesihlahla esidala se-walnut, noma uthathe uhambo oluya e-Creasta Cocosului ekhangayo futhi ube phezu komhlaba isikhashana. Uhambo ngebhayisikili kuyo yonke indawo luyindlela enhle futhi! Esigodini uzothola izindawo zokudlela ezi-2 ezincane, ezithandekayo ezine-patio lapho zinikeza khona ukudla okumnandi kwendawo. Ungakwazi ukuxhuma kabusha nokwakudala ngokuvakashela I-Village Museum kanye Nesikhumbuzo Sezisulu ZobuKhomanisi kanye Nokumelana ne-Sighetul Marmatiei.
Ngihlala nendodakazi yami nomndeni wethu wezinja, amakati, amadada kanye nehhashi, sithanda izilwane, ngalokho singabadli imifino. Ikhaya lethu, indlu yamapulangwe endala iqhele ngamamitha angu-100 ukusuka e-The Barn ....ngakho ngisekhaya futhi ngiseduze. Sithuthele lapha sisuka edolobheni elimatasa ukuze sijabulele ukuphila okulula, okunokuthula kwezwe...imvelo iyindawo ekahle yethu yokuthola ukuthula kwangaphakathi nokulinganisela kodwa futhi siyathanda ukuhlangana nabangane bakudala nokwenza abangane abasha. Ngiyajabula ukuxoxa ngesiphuzo, ngikunike amathiphu ambalwa wokuthi yini ongayenza nokuthi ungaya kuphi uma udinga.
Ngihlala nendodakazi yami nomndeni wethu wezinja, amakati, amadada kanye nehhashi, sithanda izilwane, ngalokho singabadli imifino. Ikhaya lethu, indlu yamapulangwe endala iqhele ng…